Sida loo daawado xaflada weyn ee guga la raray ee Apple ku dhawaad ​​meel kasta | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo daawado dhacdada weyn ee guga la raray ee Apple ku dhawaad ​​meel kasta
Sida loo daawado dhacdada weyn ee guga la raray ee Apple ku dhawaad ​​meel kasta
update: Hadda oo dhacdadii Gu'ga la raray ee Apple ay tahay taariikh, waxaad ka daawan kartaa (ama dib u daawataa) isku xirka YouTube ee hoose.
Dhacdada weyn ee Apple ee soo socota ayaa saacado yar inaga xigaan, waxayna ballan qaadaysaa inay mid weyn u noqon doonto taageerayaasha iPad, AirPods iyo kuwo kale. Waxay noqon doontaa arrin online-kaliya ah, sida dhacdooyinkii Apple ee dhawaanahan, oo waxaad awoodi doontaa inaad si toos ah u daawato meel kasta.
Soo hel sida ka hor inta aysan bilaaban dhacdada "Spiring Loaded" dhowr saacadood gudahood.
Warbixinadii ugu dambeeyay ayaa soo jeediyay in dhacdada Apple ee maanta ay u keeni doonto dib u cusboonaysiin iPad Pro, Apple Pencil iyo AirPods. Waxa kale oo ay arki kartaa daah-furka aadka loo filayo ee Apple AirTags (ugu dambeyntii) iyo iMac-cusub oo ay ku shaqeyso Apple Silicon.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, ma rabi doontid inaad seegto. Mana aha inaad.
Sida loo daawado dhacdada Apple's 'Spiring Loaded'
Qoraalka muhiimka ah ee gu'ga raran wuxuu bilaabmayaa 10 subaxnimo PDT maanta. Ilaa hadda sida ugu fudud ee loo daawado waxay noqon doontaa YouTube-ka adiga oo raacaya isku xirka tooska ah ee hoose.
Xidhiidhku waa inuu furo abka YouTube-ka, haddii aad ku rakibtay, iPhone, iPad ama aaladaha Android. Haddii kale, waxaad ka arki kartaa biraawsarkaaga. Waxa kale oo ay ka shaqayn doontaa qalab kasta oo Mac ama Windows ah.
YouTube ayaa sidoo kale laga heli karaa inta badan TV-yada smart iyo sanduuqyada set-top, markaa waxaad awoodi doontaa inaad daawato dhacdada Apple shaashaddaada weyn haddii aad doorbidayso.
Waxaad ogaan doontaa inuu jiro badhanka "Dejinta xasuusinta" ee qulqulka YouTube ee kor ku lifaaqan. Haddii aad taabo ama taabo taas, YouTube ayaa ku ogaysiin doona marka ay dhacdada bilaabmi doonto si aadan waxba u dhaafin.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa xasuusin jadwalkaaga adiga oo booqanaya bogga Dhacdooyinka ee mareegaha Apple.
Hadii aad saaka shaqada ku xaniban tahay oo aadan daawan karin xaflada, ha welwelin. Cult of Mac waxay soo gudbin doontaa dhammaan wararka marka ay soo baxdo, si aad halkan ula socoto.
Qoraalka muhiimka ah ayaa sidoo kale diyaar u noqon doona daawashada dalabka YouTube iyo bogga Apple ee kuwa doonaya inay dib u arkaan.
Sida Loo Wado Beddelka Badan (Waqti Yari) adoo isticmaalaya Facebook Dynamic Ads
Khiyaanada Crypto: WalletConnect app crypto been abuur ah oo loo isticmaalo in lagu xado furayaasha gaarka ah